Photocall TV: otu esi ahụ ihe karịrị 1.000 ọwa n'efu na naanị ihe ntanetị | Gam akporosis
Oriri nke iyi egwu na-abawanye n’ime afọ ole na ole gara aga. Enwere ọtụtụ ọrụ dị taa iji lelee ụdị ọdịnaya niile, ma ọ bụ n'usoro, akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri, yana mkpụmkpụ na obere vidiyo ndị nwere mmasị ọtụtụ nde mmadụ.
Otu n'ime nyiwe na na-enweta ụmụazụ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya es Photocall TV, ihe ngwọta zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile ọwa ọ bụla naanị site na ịpị ya. Na mgbakwunye, ibe ahụ nwere ụlọ ọrụ redio a kacha mara amara na Spain, mba ọzọ na ụfọdụ amaghị.
1 Gịnị bụ Photocall.tv
2 Olee otu Photocall.tv si aru oru
3 Ọwa dị
4 Kwesịrị ekwesị maka ụdị ngwaọrụ niile
5 Photocall TV mma
6 Ndị ọzọ na PhotoCall TV
7 Pluto TV, ihe na-adọrọ mmasị ọzọ
8 Kodi, ebe otutu mgbasa ozi na otutu nhọrọ
Gịnị bụ Photocall.tv
Ọ bụ ibe weebụ a kara aka na nsị nke ọwa si Spain, Europe na kọntinent America, na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịhụ ọwa ahụ ozugbo site na ịpị onyonyo ọwa ahụ. Ozugbo ịpịrị n'otu ọwa ọ ga-egosi gị njikọ njikọ ahụ gaa ịgbasa ozi.
Ọ na-atụle otu nke kasị mma obon telivishọn nke dị iche iche ige, ebe ọ bụ na International enwere ọtụtụ dị iche iche, na-enye ruru ọwa 1.000. A na - emelite Photocall.tv site n'oge ruo n'oge, ma ọ bụ site na ịgbakwunye ọwa na ndepụta ogologo, mana site na ịdozi njehie ndị ọrụ na-akọkarị.
Otu n'ime ọghọm ole na ole enwere ike ịkọwa ya bụ na anaghị enye ya iwu site n'ụdị, n'agbanyeghị nke a, onye ọ bụla na-egosi aha ejiri mara ya. Taabụ bụ National, International, Ndị ọzọ (ụzọ dị iche iche), Radio (tinyere ọtụtụ ọdụ ụgbọ ala mba na mba ụwa), Ntuziaka, Ama na VPN. Nhọrọ Ìhè ga-agbanwe ụda ojii ka ọ bụrụ ọcha na nsụgharị a maara dị ka ọkụ.
Olee otu Photocall.tv si aru oru
Ọrụ nke Photocall TV dị mfeOzugbo ịpịrị ihe oyiyi nke ụlọ ọrụ telivishọn, ọ ga-egosi ọtụtụ njikọ, ma ọ dịkarịa ala otu ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ. Nke mbụ n’ime ha na-abụkarị onye na-agbasa ozi na-agbasa ozi, ndị ọzọ na-abụkarị ihe ọmụma, ma onye nduzi ma ọ bụ ohere nke ịhụ ụdị ọdịnaya ndị ọzọ n’ime web.
Ozugbo ị mepee ọwa ahụ ọ ga - ewega gị na Photocall TV peeji nke ya na nhọrọ dị iche iche nke ọkpụkpọ vidiyo ọ bụla. Ọ bụrụ na, ọmụmaatụ, ị na-emeghe «La 1», ị nwere àgwà na ala nke emission, olu, nhọrọ iji belata na otu iji bulie ihuenyo.
Offọdụ n'ime ọtụtụ netwọk telivishọn nwere nhọrọ nke ikiri ihe nkiri, ekele niile na ịga na ọdịnaya nke onye ọ bụla n'ime ha nyere. Nke a ga - abata na ya ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgafe okwu ndị ahụ na - enweghị mmasị na anyị ma ọlị, nke a na - eme n'ọtụtụ ọnọdụ.
Photocall TV na-agbakwunye nnukwu ndepụta nke ọwa nwere ike ịnweta maka ndị ọrụ na-eji ikpo okwu, nke taa bụ ọtụtụ puku mmadụ. N'ime ha enweghị ụkọ ọwa kwụụrụ onwe nke Spain, n'etiti nke Canal Sur, TV3, TV Galicia pụtara, yana ndị mba ndị ọzọ, gụnyere Antena 3, Telecinco, TVE-1, La Sexta na ọtụtụ ndị ọzọ.
Enwekwara ụfọdụ na ndepụta iji lelee usoro dị ka Factoria de Fición na A3 Series, egwuregwu, n'etiti nke enweghị ụkọ Gol Televisión, Real Madrid TV, Barça TV, Las Palmas TV, Betis TV na Sevilla FC TV. Na mgbakwunye, na ngalaba International ụdị dị iche iche na-aga ogologo oge., dịka enwere ụfọdụ nnukwu aha dịka CNN, Fox, BBC, Euro News, yana ihe karịrị ọwa dị iche iche 150.
Ugbua na «Ndị ọzọ» enwere nnukwu ọwa dị iche icheMa ha bụ egwuregwu ma ọ bụ isiokwu ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịkpọtụ ụfọdụ ndị dị mkpa dịka AMC, Syfy, Vevo (ọwa egwu), Red Bull TV, NFL, Moto GP na ihe karịrị otu narị telivishọn. Fọdụ na-enwekarị nhọrọ nke ịlele ọdịnaya dị na ibe ahụ n'onwe ya, ebe ndị ọzọ na-eziga na ibe gọọmentị.
Ọ bụrụ na ikpebie ige ụlọ ọrụ redio, Photocall TV na-enye dị ka nnukwu ntụpọ ụfọdụ mgbasa ozi dị iche iche 120, ma na-ekwu maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, egwuregwu na ụdị ndị ọzọ. Chains ndị dị ka Europa FM, Cope, Onda Cero, Cadena Ser, esRadio, Radiolé, Melodía FM na ụfọdụ narị abụọ ndị ọzọ dị naanị na pịa.
Kwesịrị ekwesị maka ụdị ngwaọrụ niile
Maka ugbu a ọrụ TVc Photocall dị site na weebụO nweghi ngwa ma nwekwaa ya na igwe na ekwenti, komputa, komputa n’eji Smart TV. Iji jiri ya, ị ga-eji ihe nchọgharị n'ọnọdụ niile, otu n'ime ndị dakọtara na ibe bụ Google Chrome.
Dị ka ọ dị na Chrome, ọ dakọtara na ihe nchọgharị ndị ọzọ a ma ama, gụnyere Mozilla Firefox, Edge, Opera, ebe ọ na-arụ ọrụ na Safari. Weebụ na-ebu ibu ngwa ngwa, ịkwesịrị inwe ọsọ njikọ ngwa ngwa ma kwụsie ike, na-atụ aro ka ịlele igwe onyonyo na oke mma.
Peeji ahụ na-egosi ụda ojii, ọ bụ ezie na ụdị nke a maara dị ka Ìhè ọ na-agbanwe agbanwe na ndò dị mfe karị, na-acha ọcha. Photocall TV n'agbanyeghị na ịdị mfe ya doro anya bụ otu n'ime ihe zuru oke, ịnwe DTT Channels dị ka asọmpi, ọ bụ ezie na nke a na-enyekarị mpaghara na mba ọdịnaya.
Dị ka a ga - asị na ezughi, Photocall TV nwere ike ịmalite site na ekwentị gaa na ihuenyo ahụ, na - enye ogo dị mma na mkpebi dị elu. Na VPN enwere nhọrọ nke nkwekọrịta ọrụ a site na VPNs a maara nke ọmaN'ime ha bụ ExpressVPN, Cyberghost, NordVPN na HolaVPN.
Photocall TV mma
Ogo nke ọwa niile dị ezigbo mma, ga-eji njikọ Internetntanetị, ọ na-atụ aro ka ị jiri njikọ WiFi iji zere imefusị megabytes site na netwọk mkpanaka. Ọwa niile na-egosi mkpebi dị mkpa, onye ọrụ ga-agbanwe ya ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ile ụdị ọwa niile.
Ọ na-egosi njikọ ya na adreesị gọọmentị niile n'agbanyeghị itinye adreesị photocall.tv ahụ, na-enye onye ọrụ ihe ha chọrọ ịhụ n'oge ahụ. Ole na ole ọwa na-agbasa ugbu a na ogo 4K, ma ọtụtụ mụta nwa na àgwà sitere na 720 ruo 1080p.
Taa chọta ihe ọzọ na Photocall TV Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịhụ nnukwu ndepụta nke ọwa, ikpo okwu na-egwu ọwa ahụ ozugbo n'ọtụtụ ọnọdụ. Applicationsfọdụ ngwa na-eji njikọ dị na chanel.
Otu n'ime ihe kachasị mma maka ọrụ a bụ TDT Channels, ngwa ahụ adịghị na Storelọ Ahịa Play, naanị nhọrọ bụ ibudata ya na weebụsaịtị ya. Ọwa niile bụ DTT, na mgbakwunye na ịgbakwunye ndị ọzọ na-anọghị n'elu ikpo okwu nke mpaghara dị iche iche.
Ewezuga DTT Channels, ngwa nke ọwa dị iche dị, nke a ga-adabere mgbe niile n'ịhụ ọdịnaya niile site na ha. Ga-enwe ike ịhụ ndị dị ndụ, lee mmemme nọchiri anya ya na ọdịnaya na-enweghị atụ ma ọ bụrụ na ị ga-eji Premium debanye aha gị na ntanetị.
Na-achọ peeji yiri nke ahụ, naanị otu ya na Photocall TV bụ Teledirecto, n'agbanyeghị na ọ na-egosi ndepụta nke ọwa ndị dị ala. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-ejikọ ọwa ọ bụla ozugbo, na-egosi ma àgwà na nhọrọ dị iche iche.
Nhọrọ ndị kachasị mma maka Photocall TV
Pluto TV, ihe na-adọrọ mmasị ọzọ
Otu n'ime nyiwe nke toro n'oge bụ Pluto TV, ihe kachasị mma banyere ya bụ na ọ na-arụ ọrụ ozugbo na enweghị ọnya. Ọ bụ ọrụ nwere ọtụtụ ọwa, nke ị nwere ike ịlele ụdị ihe nkiri niile, akwụkwọ akụkọ, usoro na mmemme na Spanish.
Ntuziaka ahụ na-egosi gị ihe niile ka ị ghara ichefu ọdịnaya ọ bụla ọ na-enye kwa ụbọchị, ewezuga inwe ọdịnaya na ọchịchọ, yana ohere ikiri ihe nkiri mgbe ọ bụla anyị chọrọ. Pluto TV dị ka ihe dị mkpa O nwere nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ buru ibu dịka MTV, na mgbakwunye na ịnwe ọwa na-agbasa usoro akụkọ ifo.
Pluto TV nwere edemede nke ọ bụla ka anyị ghara ileghara ihe ọ bụla anya, na-enye nhọrọ nke igosi usoro ụmụaka maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ, egwu na ọwa egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụ nhọrọ dị iche na otu nzo na ọ bụrụ na anyị aga n'ihu, ọ ga-ejide anyị n'ụzọ dị ukwuu.
Kodi, ebe otutu mgbasa ozi na otutu nhọrọ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu egwu ọwa site na etiti multimedia, nhọrọ kachasị mma bụ ịnweta Kodi, ngwa a ma ama nke jikọrọ ya na ọrụ ndị ọzọ. Kodi na-enye gị ohere ijikọ isi mmalite, gụnyere ọmụmaatụ Pluto TV, Amazon Prime Video, Rakuten TV, na isi mmalite ndị ọzọ, gụnyere IPTV.
Ihe dị mma banyere Kodi bụ na ọ bụ ikpo okwu, ịnọ na sistemụ arụmọrụ niile, gam akporo, iOS na nrụnye dị ka ngwa na Smart TV. Ọ nwere ike ịbụ ngwa iji gaa ebe ọ bụla, ebe ọ bụ na Player ọ na-agba ọsọ ma jikọọ na ọrụ ọ bụla ngwa ngwa.
Gbakwunye Akara ókwú na-eme ka ọ vasatail, ịbụ otu n'ime ngwa Mara otu esi ejikwa ha ga-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe zuru oke, na-arụ ọrụ na Smart TV Box na sistemụ gam akporo. Ndepụta nke ọwa ga-enweghị njedebe, ebe ị nwere ike jikọọ na ọwa telivishọn ndị kachasị ewu ewu ozugbo.
Otu n'ime ọtụtụ nhọrọ nke Kodi bụ na ọ nwere ike ịkpọ faịlụ site na pendrive, ọ bụrụ faịlụ ọdịyo na vidiyo, yana ọba akwụkwọ. Kodi Player bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị mkpa na otu n'ime ndị ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọdịnaya ngwa ngwa site na ijikọ na sava.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Photocall TV: otu esi lelee ihe karịrị 1.000 ọwa n'efu na naanị ntakịrị pịa
Ngwa ime dị mma kachasị mma iji chịkwaa usoro niile